Iimveliso zabathengisi kunye nabanikezeli - iChina iZilayidi zeZilayidi zomzi mveliso
Ukongezwa okupheleleyo kwehlisa imbaleki yokutsala idrowa yebhasikiti yocingo
Intshayelelo:Ukongezwa okupheleleyo kwehlisa imbaleki yokutsala idreyini yocingo yebhasikithi ihlala isetyenziselwa ukutyibilika kwibhodi yebhasikithi. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi sokusebenzisa izilungiso kulungiso lwesilayidi esityibilikayo. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Umzekelo No .: I-EUR33U
Ukongezwa kathathu ezantsi kwintaba yekhitshi yesilayidi yedreyini yesilayidi
Intshayelelo:Ukongezwa kathathu ezantsi kwintaba yekhitshi yocingo webhasikidi yesilayidi ihlala isetyenziselwa ii-drawer zebhasikithi zewadi. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi sokusebenzisa izilungiso ukulungisa ikhabethe yedreyini yocingo. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Umzekelo No .: I-EUR33U2